HomeWararka CiyaarahaPavel Nedved ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu sii joogi doono Juventus
July 25, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Madaxweyne ku xigeenka kooxda Juventus Pavel Nedved ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo uu la sii joogi doono kooxda reer Talyaani wixii ka dambeeya dhamaadka suuqan xagaaga.
Xiddiga reer Portugal ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu ka tagayo Turin isbuucyadii la soo dhaafay, iyadoo Manchester United iyo Paris Saint-Germain ay labaduba sheegeen inay xiiseynayaan saxiixiisa.
Si kastaba ha noqotee, Nedved, oo hadlayay ka dib ciyaartii saaxiibtinimo ee kooxdiisu 3-1 uga badisay Cesena, ayaa xaqiijiyay in 36 jirkaan uu ku soo laaban doono kooxda ka dhisan Serie A si uu tababar ugu sameeyo xilli ciyaareedka Isniinta isla markaana uu sii joogi doono kooxda xagaagan.
Nedved ayaa u sheegay Sky Italia : “Ronaldo waxaa loo yeeray 26-ka July, wuxuu soo laaban doonaa Isniinta waana nala sii joogi doonaa .
Ronaldo ayaa dhaliyay 101 gool 133 kulan oo uu u saftay kooxda Marwada Duqda ah tan iyo markii uu ka yimid Real Madrid, oo ay ku jiraan 36 gool oo uu dhaliyay 44 kulan oo tartamada oo dhan ah intii lagu jiray ololihii 2020-21.
Weeraryahanka qibrada leh qandaraaska uu haatan kula joogo Juventus ayaa dhacaya bisha Juun ee soo socota, waxayna umuuqataa inuusan qalinka ku duugi doonin heshiis kordhin.